Fifamoivoizana kendrena no zava-miafina amin'ny varotra tsara! | Fifamoivoizana hiara-miasa
by Beverly Little on Enga anie 19, 2021
Targeted Traffic Ny tsiambaratelo ho an'ny varotra tsara!
Inona ny a fifamoivoizana kendrena vita avy?
Voantso ireo olona maniry hahita ao amin'ny Internet, izay omenao ao amin'ny tranonkalanao ary hitsidika ny tranonkalanao fifamoivoizana kendrena
Karazana fifamoivoizana inona no hitsidika ny tranonkalanao?
* Olona izay mitady mitady karazana hafa tolotra sy entana ary tonga tsy tonga teto
* Olona manandrana mitady zavatra azo ampitahaina amin'ireo omenao ao amin'ny tranonkalanao
* Olona manandrana mitady izay ilainao omena
Tena tokony hiezaka ny hisoroka ny fizahana ny vondrona voalohany ianao, ary handrisika ny olona 2 sy ny vondrona fahatelo
Ny vondrona faharoa, dia fifamoivoizana kendrena, ary na dia tsy hividy ny entanao aza izy ireo, dia azonao atao ny mividy ireo zavatra ampiasain'ny Affiliate Program amin'ny tranokalanao na manome vola anao amin'ny alàlan'ny Adsense
Ary ny vondrona faha-3, dia ny karazana fifamoivoizana kendrena izay ho tonga eto amin'ny tranokalanao, miaraka amin'ny faniriana hahita izay ampiasainao, ary azo inoana fa hividy izany aminao.
Ny fifamoivoizana kendrena dia mety tsy hijanona ao anaty toe-tsaina amin'ny andro fitsidihan'izy ireo ny tranonkalanao, na izany aza dia hamaly ny tolotra omena anao izy ireo, ary raha manome antony hiverenana amin'ny tranokalanao ianao (manana tranokala ara-pitaovana lehibe), izy ireo afaka mividy aminao any aoriana.
VAKIO IZANY Fomba bebe kokoa hikendrena ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao
Mety efa naheno ianao fa ny zavatra tadiavinao mba hanaovana serivisy lehibe amin'ny Internet dia fifamoivoizana, fifamoivoizana be dia be. Tsy mila fifamoivoizana tsotra fotsiny ianao fa mila fifamoivoizana TARGETED satria io no karazana mpitsidika tokana manome anao karama.
Tsy mila mpitsidika ianao, mila mpitsidika voamarina na kendrena hihetsika amin'ny fomba fisainana tsara ary maniry hamaky izay lazainao ao amin'ny tranonkalanao.
Azonao atao ve ny miasa amin'ny fifamoivoizana tsy voatrandraka?
Eny, azonao atao, na izany aza, dia handany vola sy fotoana bebe kokoa hanaovana izany ianao.
Isaky ny mpitsidika 100 na 1000 be dia be dia be ny mpitsidika dia mety hahita iray izay tena mieritreritra ny fifanarahana nataonao ianao, na izany aza, raha mijanona amin'ny tetik'asa karama isaky ny tsindry ianao dia mila mandany tsindry 100 na 1000 hahazoana ny varotra tsirairay.
Raha manandrana mampandeha ny fifamoivoizana amin'ny alàlan'ny motera fikarohana an-tserasera ianao dia mitovy ihany, dia mila mpitsidika 100 na 1000 heny kokoa ianao hahazoana ireo izay tena mijery izay ampiasainao.
VAKIO IZANY Ahoana no ataoko mifantoka amin'ny fifamoivoizana amin'ny bilaogiko?
Ahoana no ahafahanao mahazo fifamoivoizana kendrena?
Ny fomba mahomby indrindra amin'ny fisarihana fifamoivoizana kendrena mankany amin'ny tranonkalanao dia ny fampiasana ny motera fikarohana an-tserasera, ny tranokala lahatahiry ary ny rohy avy amin'ireo tranonkala mifandraika.
Ary ahoana no hanoloran'izy ireo anao amin'ny fifamoivoizana kendrena?
Hataon'izy ireo izany raha mahatratra avo ianao ambony, satria raha manana ny vokatra mety indrindra ianao ary tolotra ho an'ny mpanjifanao kendrena, ary rehefa mitady izany amin'ny motera fikarohana na tranokala fampiroboroboana izy ireo dia manana ny tranokalanao amin'ny toerana 400 ianao, mety TSY hahita anao na mividy avy aminao aminao velively.
High ambony amin'ny motera fikarohana dia tsy hanome anao ny fivezivezena kendrenao fotsiny, fa hanome fahatokisana anao koa izy ireo, ary ireo olona mahita anao ao amin'ny lisitr'izy ireo, dia ho tonga eto amin'ny tranonkalanao, miaraka amin'ny karazana saina tadiavinao ao anaty mpitsidika.
Filed Under: Targeted Traffic Tagged With: Targeted Traffic, Web, tranonkala